Baarlamanka PL oo go'aan kasoo saarey qaab loo ansixinayo wasiirada cusub
GAROWE, Puntland - Xubnaha Gollaha wakiilada dowlada Puntland ayaa maanta fadhi aan caadi ahayn ku yeeshay xaruntooda magaalada Garowe, iyadoo uu shir gudoomiyay gudoomiyaha, Cabdixakiin Maxamed Axmed [Dhooba].
Fadhiga oo ajendahiisa uu ahaa cod u qaadista hadii wadar ahaan loo meel-marinayo ama mid-mid xubnaha cusub ee Gollaha Wasiirada ayaa waxaa soo xaadirtay 53-da xubnood ee uu Golluhu ka kooban yahay.
Coddeynta oo ahayd mid aad isugu dhaweyd ayaa waxaa u ogolaatay qaraarkani 26 sharcidejiyaal, halka ay kasoo horjeesteen 24 kale, iyada oo ay ka aamuseen 3 Xildhibaan.
Bishii hore Janaayo ayay ahayd markii qaar ka tirsan Gollaha Shacabka DPL ay soo jeediyeen in mid-mid kalsoonid u siiyaan wasiirada cusub ee la rajaynayo inuu ku dhawaaqo Madaxwayne Saciid Cabdullaahi Deni.
Xildhibaanada u olaleynayey qaraarka laga codeeyay ayaa ku doodaya in ujeedkoodu yahay si ay u xaqiijiyeen tayada iyo wax qabadka uu la imaan karaan wasiirada cusub si ay waajibaadkooda uga soo baxaan.
Maalmaha soo aadan ayaa la rajeynayaa inuu Madaxwayne Deni soo bandhigo liiska Gollahiisa wasiirada cusub, kuwaasi oo la sheegayo inay tirro iyo tayo ahaan ka gedisnaan doonan xubnahii hore.
Shalay ayey ahayd markii xubnaha wakiilada Puntland ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen in degaanada Puntland laga hirgeliyo nidaamka dimoqraadiyada iyo doorasho qof iyo cod ah shan sano kadib.
Wasiirro kale oo kamida Xukuumadda cusub ee Puntland oo la dhaarijiyay
Soomaliya 17.02.2019. 13:17
Madaxweyne Deni ayaa sheegay in Gollahiisa Wasiiradda ay wixii hadda ka dambeeyay la...
Puntland 25.07.2018. 16:07